Marcus Hutchins, Kuteterera Anopomerwa Mhosva dzeKugura | Linux Vakapindwa muropa
Nekuteterera mhosva yekupaza mhosva, Hutchins anotarisana nejeri nguva uye muripo.
Marcus Hutchins ndiye muBritish hacker uyo kufunga kuti ungamisa sei WannaCryhlengo. Iye achangobva kuzivisa izvozvo nemhosva yekuba mhosva kupokana nehurongwa hwekubhanga kweUnited States. Hutchins angatarisana kusvika pagore mutirongo pamhosva imwe neimwe yemhosva. Kune izvi zvinofanirwa kuwedzerwa zvirango zvemari.
Mubiridzi akazivikanwa pasi rese paakawana nzira yekumisa WannaCryhlengware. WannaCry yakabata makomputa anodarika 141 anosanganisira ayo ekambani yeSpain Telefónica uye neBritish health service.
Hutchins anonyatso kuzivikanwa munyika yevanobiridzira nemazita ake ekuti Malware Tech.
"Ndinozvidemba nezviito izvi uye ndinogamuchira mutoro wakazara wekukanganisa kwangu",
Iyo yekubira, iyo parizvino iri kushanda seyeyezvezvezvezvezvezvezvezve kuchengetedza, inoenderera ichiti:
“Sezvo ndakura, kubvira ipapo ndanga ndichishandisa hunyanzvi hwakafanana hwandakashandisa zvisirizvo makore akati wandei apfuura nekuda kwekuvaka. Ndicharamba ndichishandisa nguva yangu kuchengetedza vanhu kuti vasarwiswe nemarware. "
Muna 2017, Hutchins akawana nzira yekumisa kupararira kweWannaCry. Iyo rudzikunuro yakaedza kubatanidza kune isina kunyoreswa dura, ikatadza kuzviita, yakavharidzira hard drive. Pakunyoresa domeini, WannaCry yakabatana uye haina kunyorera chero chinhu.
Inofungidzirwa segamba nevezvenhau, vakaenda kumusangano wekuba muLas Vegas. Muguta rino akasungwa nemhosva dzaakabvuma iye zvino.
Dare remubatanidzwa, rakatangwa muWisconsin, rakamupomera mhosva yekuve nebasa rekugovera iyo Kronos banking Trojan. Kronos akaba mazita evashandisi uye mapassword kubva kunzvimbo dzekubhanga.
Maererano nemhosva, Hutchins yakanga iri chikamu chehurongwa hwekuparadzira chishandiso chekubira mune inonzi misika yerima.
Akaburitswa mubhero achimirira kutongwa, akaenderera mberi achishandira kambani yekuchengetedza. Kusvika chirevo chake, akange aramba asina mhosva
Mushure mekusungwa nharaunda yematsotsi yakamutsigira. Nharo yake yaive yekuti lVanotsvaga vanowanzo shanda nekombuta kodhi izvo zvinogona kutumirwa nezve zvinangwa zvakashata.
Vachuchisi havasati vataure, saka hazvigoneke kuziva kana chikumbiro ichi chikamu chechibvumirano chekudzora mutongo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Marcus Hutchins anoteterera mhosva yekuba mhosva